Binance क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज हो जसमा 400 भन्दा बढी क्रिप्टोकरन्सी भएका प्रयोगकर्ताहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ। यो विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज हो, यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री मोबाइल अनुप्रयोग, सबैभन्दा कम कमीशन, यसको सन्दर्भ प्रणाली र धेरै सुविधाहरूको साथ प्रयोगकर्ताहरूलाई फाइदाहरू प्रदान गर्दछ।
Binance सदस्यता प्रक्रिया बनाउँदा ध्यान दिनु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंले सन्दर्भ ID को ठीक तल लेखिएको “तपाईंको कमीशन छुट दर 20% हो” पाठ देख्नुहुन्छ । यदि यस क्षेत्रमा केहि लेखिएको छैन भने, तपाइँ कमीशन छूटबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्न।
Binance 20% रेफरल लिङ्क: https://accounts.binance.com/en/register?ref=UL2M4EB8
जब तपाइँ Binance रेफरल कोड संग दर्ता गर्नुहुन्छ, तपाइँ Binance एक्सचेन्ज मा तपाइँको खरिद र बिक्री को लागी 40% सम्म को कमीशन छूट को लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। लेखमा, म तपाईंलाई 40% कमीशन छुट बचत गर्न के गर्न आवश्यक छ भनेर विस्तृत रूपमा साझा गर्नेछु।
क्रिप्टोकरेन्सीहरू व्यापार गर्दा तपाईंले Binance लाई भुक्तानी गर्नुहुने कमिसनहरूलाई न्यूनीकरण गर्न Binance सन्दर्भ प्रयोग गरिन्छ । Binance द्वारा अनुमति दिइएको उच्चतम कमीशन दर 20% हो।
Binance उच्चतम सन्दर्भ कोड: UL2M4EB8
Binance सन्दर्भित / गैर-सन्दर्भित सदस्यता मा आयोग दरहरू
Binance मा मानक कमीशन दर 0.10%, वा 1 प्रति हजार हो। जे होस्, यो दर घटाउने तपाईंमा निर्भर छ। तपाईले तलको उदाहरणबाट सन्दर्भ कोडको साथ सदस्य बन्न कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ;
यदि तपाइँ Binance सन्दर्भविहीन लिङ्कको साथ सदस्य हुनुभयो भने, तपाइँले तिर्नु पर्ने कमीशन दर 0.10% ‘रोक हो।
यदि तपाइँ Binance 20% रेफरल कोडको साथ सदस्य हुनुभयो भने, तपाइँले तिर्नुहुने कमीशन दर 0.08% मा घट्छ ।
यदि तपाईंले BNB 20% रेफरल कोडमा साइन अप गरेपछि थोरै मात्रामा BNB सिक्का किन्नुभयो भने, तपाईंले +25% कम कमीशन तिर्नु हुनेछ र तपाईंले ट्रेडिंगमा तिर्नुहुने कमिशन दर ०.०६% हो ।
Binance रेफरल कोड संग सदस्यता को लाभ
उदाहरणका साथ Binance रेफरल कोड र सदस्यता लाभहरू व्याख्या गरौं ;
उदाहरणका लागि, तपाईंले Binance खाता खोल्नुभयो र $ 5,000 जम्मा गर्नुभयो। तपाईंले एक महिनाको लागि 20 खरिद र 20 बिक्री लेनदेन गर्नुभयो। यस अवस्थामा, तपाईंले कुल 40 खरिदहरू र बिक्रीहरू गर्नुहुनेछ र तपाईंले व्यापारको मात्रामा 5,000 x 40 = $ 200,000 सिर्जना गर्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ सन्दर्भ कोड प्रविष्ट नगरीकन सदस्य बन्नुभयो भने, तपाइँले 0.10% तिर्नु हुनेछ, अर्थात् 1 प्रति हजार आयोग। यस अवस्थामा, तपाईंले तिर्नुहुने कमीशन शुल्क $ 200 हुनेछ।
यदि तपाईं 20% रेफरल कोडको साथ सदस्य हुनुभयो भने, तपाईंले 0.08% तिर्नु हुनेछ, अर्थात् 0.8 प्रति हजार। यस अवस्थामा, तपाईंले तिर्नुहुने कमीशन शुल्क $ 160 हुनेछ।
यदि तपाइँ 20% रेफरल कोडको साथ साइन अप गरेपछि तपाइँको वालेटमा BNB सिक्का राख्नुहुन्छ भने, तपाइँले 0.06% को कमीशन तिर्नुहुनेछ, अर्थात् प्रति हजार 0.6। यस अवस्थामा, तपाईंले तिर्नुहुने कमीशन शुल्क $ 120 हुनेछ।
तपाइँले कमाउनु भएको कमीशन छूट तुरुन्त तपाइँको खातामा फिर्ता गरिन्छ। तपाईंले Binance गृहपृष्ठबाट “सन्दर्भ > तपाईंसँग साझा गरिएका आयोगहरू” मार्ग पछ्याएर तपाईंले कमाएको कमिसन छूटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ।
Binance रेफरल कोड कहाँ लेख्ने?
मोबाइल एप मार्फत Binance खाता खोल्दा, सन्दर्भ ID फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस् (वैकल्पिक) र कोड UL2M4EB8 प्रविष्ट गर्नुहोस्।
रेफरल कोडले कति प्रतिशत कमिसन छुट दिन्छ भनी हेर्नको लागि, तपाइँ यो लिङ्क https://accounts.binance.com/en/register?ref=UL2M4EB8 मा सन्दर्भ ID फिल्डमा तपाइँको 20% कमीशन छुट हेर्न सक्नुहुन्छ।
Binance रेफरल कोड दरहरू
Binance ले साइन अप गर्दा तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको रेफरल कोडको आधारमा तपाईंलाई विभिन्न आयोग छूटहरू प्रदान गर्दछ। यदि तपाईंले सन्दर्भ ID फिल्ड खाली छोड्नुभयो भने, तपाईंले आयोग छुटबाट लाभ उठाउन सक्नुहुने छैन।
Binance आयोग छुट संग रेफरल दरहरु: 0%, 5%, 10% र 20% यो आकृति।
Binance रेफरल कोड कसरी उत्पन्न गर्ने?
Binance खाता खोलिसकेपछि, तपाइँ तपाइँको रेफरल कोड साझा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँका साथीहरु को लेनदेनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ जो तपाइँको रेफरल कोड संग सदस्य छन्। तपाईंको सदस्यता प्रक्रिया पूरा गरेपछि, ” सन्दर्भ > उन्नत सन्दर्भ सेटिङहरू > + नयाँ सन्दर्भ थप्नुहोस् ” पथ पछ्याएर सन्दर्भ कोड सिर्जना गर्नुहोस्।
तपाईं 20 फरक सन्दर्भ कोडहरू सम्म सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले सबै प्लेटफर्महरूमा सिर्जना गर्नुभएको सन्दर्भ कोड वा लिङ्क साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँसँग नयाँ सदस्यता छ भने, तपाइँ 0%, 5% र 10% कमीशन छूटको साथ रेफरल कोड सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले कुल 20% सन्दर्भ कोडहरूको अधिकतम 10% साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँसँग Binance सम्बद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता छ वा यदि तपाइँको स्पट वालेटमा 500+ BNB छ भने, 41% तपाइँको खातामा जम्मा हुन्छ। तपाइँ तपाइँलाई दिइएको 41% रेफरल कोड को 20% सम्म साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँको कमिसन कमाई तुरुन्तै तपाइँको सन्दर्भ कोड संग एक सदस्य भएको व्यक्ति द्वारा गरेको लेनदेन मा तपाइँको खाता मा प्रतिबिम्बित हुन्छ। तपाईले कम ब्यालेन्स सिक्कालाई प्रत्येक6घण्टामा BNB मा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
के Binance सुरक्षित छ?
कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सी बजार सुरक्षित छैन। यद्यपि त्यहाँ सधैं ह्याकिङको जोखिम छ, हामी भन्न सक्छौं कि सबैभन्दा भरपर्दो विनिमय Binance हो। Binance ले सम्भावित जोखिमहरू विरुद्ध स्थापना गरेको कोषमा तपाईंको लगानीको १०% सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। SAFU संग, Binance सापेक्ष विश्वसनीयता प्रदान गर्दछ।
“के Binance सुरक्षित छ?” प्रश्न भन्दा “म कसरी मेरो Binance खाता सुरक्षित राख्न सक्छु?” प्रश्न सोध्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो Binance खाता सुरक्षित राख्न;
तिनीहरूको वेबसाइटमा दर्ता नभएको इ-मेलको साथ साइन अप गर्नुहोस्।
अनुमान गर्न सजिलो पासवर्ड बनाउनुहोस्।
फोन पुष्टिकरण गरेपछि, “Google प्रमाणक” अनुप्रयोग सक्रिय गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
आफ्नो इन्टरनेट र मोबाइल डाटा बाहेक अन्य कुनै पनि इन्टरनेटबाट आफ्नो खातामा लग इन नगर्नुहोस्।
आफ्नो कम्प्युटर वा फोनमा अविश्वसनीय प्रोग्राम/एप्लिकेशनहरू स्थापना नगर्नुहोस्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ Binance.com मा लग इन हुनुहुन्छ। https:// र सुरक्षित पाठ हेर्न निश्चित हुनुहोस्। ह्याकरहरूले सामान्यतया bin ance.com खोल्छन् र तपाईंको लगइन जानकारी पहुँच गर्ने प्रयास गर्छन्। यद्यपि यो ज्ञात सबैभन्दा सरल विधि हो, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले लापरवाहीपूर्वक आफ्नो सदस्यता जानकारीको साथ त्यस्ता साइटहरूमा लग इन गर्छन्।
मेल फिशिङ ह्याकरहरूले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सामान्य तरिका हो। Binance बाट भएको बहाना गर्ने इ-मेल तपाईंको इ-मेल ठेगानामा पठाइन्छ र तिनीहरूले तपाईंको लगइन जानकारी इ-मेल मार्फत प्रविष्ट गर्नको लागि पर्खिरहेका छन्।
पैसा स्थानान्तरण गर्दा, श्वेतसूचीमा तपाईंको आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी वालेट ठेगाना थप्न निश्चित हुनुहोस्। तसर्थ, कुनै पनि प्रतिलिपि गर्ने प्रक्रियामा, तपाईंको स्वामित्व नभएको वालेटमा पैसा हस्तान्तरण नगर्नुहोस्।
तपाईलाई सन्दर्भ कोडको बारेमा के जान्न आवश्यक छ
रेफरल कोड जसले सबैभन्दा बढी कमीशन छूट प्रदान गर्दछ 20% हो।
जब तपाईं सदस्य बन्नुहुन्छ, सन्दर्भ आईडी अन्तर्गत “वैकल्पिक” पाठमा क्लिक गर्नुहोस् र सन्दर्भ कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Binance खाता खोले पछि कुनै रेफरल कोड थपिएको छैन।
यदि तपाइँसँग सामाजिक मिडियामा ठूलो दर्शकहरूलाई अपील गर्ने खाताहरू छन् भने, Binance सम्बद्ध कार्यक्रममा आवेदन गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यसले तपाइँको रेफरल दर 20% बाट 41% मा वृद्धि गर्नेछ।
यदि सम्बद्ध कार्यक्रमको दायरा भित्र व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 500 भन्दा बढी छ भने, तपाईंको रेफरल दर 20% बाट 50% मा बढाइनेछ।
Önceki İçerik바이낸스 20% 추천 코드: UL2M4EB8
Sonraki İçerikUL2M4EB8: کد ارجاع 20 درصدی بایننس
2021 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık) Taban Puanları & Başarı Sıralamaları
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları